Isi > Cygba Ígwè > Ugogbe anya anwụ na-agba ịnyịnya ígwè - depụtara ajụjụ na azịza
Oakley Flak 2.0 XL bụ okirikiriukwuegwuregwu ugogbe anya maka anwụ mere zuru ezu na PRIZM Road anya m makaịgba ígwèna ezigbo eluRxndakọrịta. Flak 2.0 XL nwere oghere dị ogologo, ihe eji emechi zuru ezu, na etiti nke O-Matter ka ọ dị fechaa ma dịgide ka ha na-abịa.Ọnwa Ise 22, 2021
Ọ bụrụ n ’ị na-eche maka ịzụ enyo anya igwe na gịnị kpatara na ịgaghị? Naanị otu anya ka ị ga - eme ka nchedo dị mkpa mgbe ahụ ị nọ n’udo. Site n'enyemaka nke Oakley ndị na-akwado isiokwu a, m ga-ejegharị gị site na ụdị ugogbe agba ịnyịnya igwe dị iche iche na atụmatụ dị iche iche ị ga-ele anya mgbe ịzụrụ ha. (Logo booms) (gravel crunch) (egwu egwu siri ike) N'ezie, Oakley bụ otu n'ime ọtụtụ ụdị ndị ọzọ n'ahịa.
Mana site na ịzụta ihe a, m ga-atụle igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ọbụlagodi igwe kwụ otu ebe maka ọrụ ahụ. Dịka ịzụrụ igwe kwụ otu ebe, a ga-elebara ụfọdụ echiche anya, dịka ụdị ịgba ịnyịnya na ọnọdụ ị na-agba. Nke a ga-emetụta gia na enyo anya gị.
Downhill ma ọ bụ nzọ ụkwụ nzọ ụkwụ, Southern California ma ọ bụ Yorkshire, na-ahọrọ nri ugogbe anya. Ma ọ bụ ka m kwuo iko n'ihi na n'ezie a ga m ekwu maka iko, kwa ga - eme nnukwu ihe dị iche na ho ị ga - ahụ ha. Ihe dị ukwuu banyere ọtụtụ iko bụ na ị nwere ike gbanwee lenses iji mee ka otu iko iko mee ihe dị iche iche ma nwee ike iji ya rụọ ọrụ ọnọdụ dị iche iche.
Tupu m banye na nkọwa, gịnị kpatara nke a ji bụrụ ezigbo echiche? Na-akwọ ụgbọala na iko? Oh, nwa nwoke, ị mere m ezigbo mma ♪♪ Ee, M ♪ - Anya nchedo nke unyi, site na anyanwụ na ụzarị ọkụ UV ya, ụmụ ahụhụ na-efe efe, ifufe na-adọpụ anya gị na ọsọ. Na-ele ngwa ngwa, ee? Ha nwedịrị ike ichebe gị ma ọ bụrụ na ị daa, mana anaghị m ada (ọchị) ♪ Nwatakịrị, aga m enweta ya ♪ - Aka nri, ka anyị bido n’ụdị eji agba ịnyịnya na nha ha. Ibu ka mma mgbe niile.
Yabụ na anaghị m ahụ onwe m dị ka akara ngosi ejiji, mana ọ bụrụ na m kpu okpu ihu ihu, enwere m ike iyi enyo anya n'ihi na m na-agbago ugwu, enduro ma ọ bụ na-eme nnukwu jumps, na iko na-enye nchebe kachasị mma site na mmiri, si unyi, kamakwa aa bit si na ida. Fọdụ ndị mmadụ na-ahọrọ enyo anya nwere okpu ihu zuru oke, nke ụfọdụ na-eche na ị na-agba ịnyịnya ugwu na-enweghị usoro igwe kwụ otu ebe, mana mgbe ọ na-ekpo ọkụ ọ nwere ike bụrụ ihe ezi uche dị na ya n'ihi na ikuku ikuku bụ ụzọ, dị mma karịa enyoanya. (Live Dance music) Inweta iko ndị dabara nke ọma na okpu agha gị ga-enyekwa aka ka okpokolo agba na ụlọ arụsị nke iko ahụ emetụ okpu agha ahụ ma ọ bụ tinye ya n'isi gị, nke nwere ike iru ala.
Yabụ na nke ahụ bụ ụdị nha na-emetụta etiti ahụ, mana ụfọdụ iko nwere ụlọ arụzigharị iji hụ na ha dabara nke ọma. N ’ihu igwe iko gị ọ na-emetụ n’egedege okpu agha gị? Amaara m na ụfọdụ ndị mmadụ nwere okpu agha nke na-anọdụ ala ntakịrị ma ọ bụrụ na ha metụ mgbe okpu agha gị na-agagharị, ọ ga-ewe iwe. yabụ enwere m ike ịhọrọ ugegbe buru ibu dịka jaketị ụgbọ elu ndị a.
Y’oburu n’inwe ụdị nsogbu ọ bụla na enyo anya gị na okpu agha, ị nwere ike chọọ maka obere fọọm ole na ole. Ọzọkwa na anya, ikekwe ọ bụrụ na ị nwere warara ihu, ị nwere ike chọọkwa nke pere mpe. Ndị buru ibu nwere ike ịdị ntakịrị oke.
Echere m na nke ahụ ga-eme na igwe ịgba ọsọ, ime ihe n'eziokwu. Echere m na nkezi ọsọ dị ntakịrị elu. Anaghị eme na ọtụtụ mgbe na igwe kwụ otu ebe, mana ejiri m n’aka na ọtụtụ n’ime unu ndị na-ahụ nke a ga-agba ịnyịnya igwe na igwe kwụ otu ebe.
Yabụ ị kwesịrị ịtụle ịzụ iko nke ị nwere ike ime ma ha abụọ, yana ị nwekwara ike gbanwee lenses dị iche iche nke ga-aka mma maka ọzụzụ ọ bụla. Nke ziri ezi, ka anyị gakwuru ugogbe anya. Ya mere, ndị a bụ ụcha anya m, o doro anya na ọ ka mma maka ọnọdụ anwụ na-acha.
Aga m ewere ụfọdụ nke ncha ahụ nwere ụbọchị anwụ na-acha ebe a na England taa echefukwala banyere nchedo UV, yabụ mee ka anya gị dị mma ma chebe ya na anyanwụ. Ihe ndị a bụ anya lenses Oakley Prizm Trail Torch na enyo ndị a. Yabụ ị nwere ike ịnụ maka teknụzụ Oakley Prizm a.
Yabụ Oakley mere nke a iji wepụta ogologo ntụgharị dị iche iche nke ìhè na-enye gị nlezianya na anya dị egwu n'okporo ụzọ ahụ ka ị wee nwee ike ịhụ ọdịiche dị mma n'etiti ihe dịka mgbọrọgwụ na nkume na ụzọ elu ụzọ. Yabụ anyị nwere iko Prizm maka goofu, anyị nwere enyo ụzọ. Ndị a bụ nzọ ụkwụ, n'ihi ya, maka igwe kwụ otu ebe ugwu, ma mekwaa nsụgharị Torch nke ha. (Ugwu egwu egwu) nwetara ụdị abụọ dị iche iche nke anya igwe kwụ otu ebe ebe a, ụzọ Prizm.
Oakley mere ka ndị a dịtụ mma karị, obere obere iwe, ya mere ha na-arụ ọrụ nke ọma n'okpuru osisi ndị dị ka anyị nwere ebe a na n'èzí na ìhè anyanwụ. Kpamkpam bara uru ịtụle inwe nnọchi anya m ma ọ bụrụ na n'oge ụfọdụ ha na-a bit kpụchara akpụcha, kamakwa nnọchi anya m maka ọnọdụ dị iche iche, ma ọ bụrụ na ị na-ebi ebe dị ka UK, ebe ọtụtụ oyi ọ bụ oke drab na ọchịchịrị Iji n'ezie eyi tinteds anya, a ezi set nke doro anya m bụ zuru ezu. Na mgbakwunye, ị nwedịrị ike ịtụle ịzụta otu iko maka ịnya ụgbọ ala.
bụ ntụekere ahụekere ntụ ntụ dị mma maka gị
Yabụ na Oakley, ị nwere ike nweta okporo ụzọ Prizm a mgbe ọ dị mfe ịnweta ugogbe anya maka anwụ na-arụ ọrụ ma igwe kwụ otu ebe na ụzọ. Ga-ahụ na-aga nke ọma dị ka ịtụle aerodynamics nke iko? Agaghị m, mana Oakley na-eme, ị nwere ike ịchọrọ, ọ bụrụ na ịmee, m bụ ezigbo ụkwara (ụkwara) nerder biker, ma ọ bụ karịa nke kaboodu roadie. (Joy electronic music) Laa azụ na iko, obere iko dị ka Radar EV a na-enye ikuku ikuku ka mma, yabụ enwere ike ịbawanye na ọnọdụ ọkụ, kamakwa mgbe ihe na-eme mmiri ma nwayọ nwayọ na vepo dị egwu malitere.
Fọdụ iko ndị ọzọ na-enye ụzọ dị iche iche iji mee nke a. E nwere ụzọ dị iche iche ndị nrụpụta si arụ ọrụ mgbochi ha, site na mkpuchi dị iche iche na anya m wee rụpụta atụmatụ ndị dị na Jawbreaker, ị ga-ahụ na anya m nwere oghere na ala na elu. Na jaketị ụgbọ elu, ị nwekwara ụdị mpempe akwụkwọ a na-enweghị osisi ka uzuoku wee gbapụ nke ọma ma dịkwa nfe, yana obere atụmatụ ahụ mara mma, ahụtụbeghị m nke ahụ mbụ.
Hụ imi ahụ laghachi azụ, megharịa iko ndị ahụ site na ihu gị iji nye gị obere ikuku. Kedu maka iko? Ekwuola m ihe ha dị mma maka ya. Downhill, enduros, ụdị nke ịnya ịnyịnya nke kachasị njọ, kamakwa ụfọdụ n'ime otu echiche ahụ ka ekwesịrị iburu n'uche, dịka na ha dabara okpu ihu gị zuru oke? Iko, eleghị anya ị nwere ọtụtụ nhọrọ, n'ezie site na doro anya na tinted otu, dị iche iche ịnya ụgbọ ala ona dị iche iche anya m.
Ajuju m nuru na mbu bu ma enyo anya eji aru oru? Ọ bụ ezie na ha yiri nke ukwuu, e nwere obere obere ma dị ezigbo mkpa. Ihe ndị dị ka ụfụfụ nke gogle a na-agba ọsọ nwere ike ịbụ nke a na-akwado iji mee ka ị kpoo ọkụ. Na igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ motocross goggle, dị ka ụfọdụ ụdị CoolMax ụfụfụ ezubere maka ikuku iji mee ka ị dị jụụ ọ bụ naanị inye gị ikike dị iche iche na-ahụ anya karịa igwe enyo igwe.
Kedu maka iko ndị nwere okpu agha jet? Ọ dị mma, ụfọdụ ndị na-agba ịnyịnya na-enwe mmetụta nke nchebe ọzọ, ma eleghị anya ọ bụghị ịgafe mba. You'll ga-ekpo oke ọkụ, mana maka ụfọdụ njem na-enyere ndị njem aka, gịnị kpatara ya, nke a bụ nhọrọ ọzọ dị mma. (egwu egwu egwu) Ihe ndị ọzọ iji nyocha tupu ịzụrụ? Ọnụahịa ahụ doro anya na ọ bụ nnukwu.
Beenlelewo anya m ndị a, ha adịla mma iyi? Kedu maka ọnụọgụ nke anya m dị iche iche ị nwere ike iji? Nweta ndochi maka iko ndị a, kamakwa maka nhọrọ dịka iko ndị toro eto, iko doro anya, ọnọdụ ịkwọ ụgbọala dị iche iche? Kedu maka ihe dabara adaba? Glassesfọdụ iko na-enye ihe dị iche iche, dịka Asia Fit. Ọzọkwa ndozi nke ogologo ụlọ nsọ na ihe ndị a Ka emechara, gịnị ka ị ga-enweta na ugogbe anya gị? Get nweta ọmarịcha obere ihe siri ike iji mee ka ugegbe gị dị mma na akpa nke na-eme ka oghere lens? N'ihi na enyo anya gị nwere ike mebie karịa na akpa gị karịa na ụzọ. Ọ dị mma, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe ole na ole sitere na Oakley na GMBN mgbe ahụ maka GMBN zutere Greg Minnaar, onye ọkwọ ụgbọala na-akwado ụlọ ọrụ, anọnyerela anyị ruo ọtụtụ afọ.
Fọdụikonwee swappableanya mkama, ya mereị nwere ikehọrọ si, sịnụ, doro anya, odo ma ọ bụ anwụrụ ọkụ tupugịsetịpụrụ.Ọ bụrụnke giyọọ ugogbe anya mmiri,ị nwere iken'ezieokirikirin'ime ndị ahụ. Ha agaghị egbochi ikuku ma ọ bụ ìhè na-enwu gbaa dị ka ihe dị irè, dịka ha ga-enwe obere ngwugwu ma ọ nwere ike ghara ịdị.Jul 25. 2012 r.
N’uche m, iko ịgba ịnyịnya bụ ngwa dị mkpa maka ịgba igwe. Ọ bụghị naanị na ha na-echebe anya gị site na ụzarị ọkụ UV, kamakwa ha na-enye gị echiche doro anya karị dịka ị gaghị eleba anya n'anyanwụ maka ụfọdụ ndị nọ ebe ahụ ebe ikuku na-eku, mmiri na-ezo ma ọ bụ na-agba ájá ebe ma ọ bụ ntakịrị ntakịrị unyi n'okporo ámá na ihu ha. Agbanyeghị, ọ dị ha mkpa ilekọta ha anya. (egwu obi ụtọ) Ugbu a bụ ụzọ dị mfe iji kpochapụ ugogbe anya maka anwụ.
Ihicha na ngwa ngwa bụ aka dị ọcha, na-agba iko n'okpuru obere mmiri iji wepụ ihe ruru unyi ọ bụla, wee tinye nsị ole na ole nke ihe nhicha n'etiti mkpịsị aka gị ma nwee nsị dị mfe site na ngagharị okirikiri n'akụkụ iko abụọ ahụ .Mgbe ahụkwa nri ahụ ncha, ncha efere dị n'akụkụ imi, pad na ogwe aka yana grippers roba. Mgbe ịmechara nke a, ị ga-asachapụ ya nke ọma na mmiri ọkụ na mgbe ị mere Ọ bụrụ na ibi n'ebe nwere mmiri siri ike, yabụ ọtụtụ calcium na magnesium, jiri mmiri dị ọcha maka nke a.
Nke a na-egbochi streak. Ugbu a, mgbe ịnwere anya m dị mfe iwepu, ma ọ bụ nke ewepụtara iji wepu ya, a ga-ewepụ ha. Ọ dị ịtụnanya ole nnu sitere na ịgbado ọkụ nwere ike ịnakọta n'ime oghere na etiti, yana gburugburu mpempe imi ma ọ bụ akwa ntị.
Na mgbakwunye, mmanụ ndị ọsụsọ gị nwere ike imebi akụkụ ndị a, yabụ ị kwesịrị ilekọta ha anya. Mgbe ịmechara ihe ahụ niile, ị ga-achọ ịma jijiji ma ọ bụ pịa mmiri si na iko, na ụwa zuru oke, ọ bụrụ na ịnwe agụụ ikuku, jiri ya kpoo ụmụ irighiri mmiri. Ma ọ bụ ịnwere ike iji draya ntutu na ọnọdụ dị jụụ iji wepu mmiri.
otu esi edozi ahụ ike
Otu ndụmọdụ ebe a, ozugbo inwere iko ahụ si na etiti ahụ, bụ ijide iko ahụ n'akụkụ ya ka ị ghara inweta nsị ma ọ bụ mkpịsị aka gị. Ugbu a ihe ị na-achọghị iji kpoo anya m bụ akwa nhicha ma ọ bụ 100% Cotton. Ihe kpatara ya bụ na kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, akwa nhicha akwụkwọ a nwere ike ịnwe obere iberibe osisi, ha, n'aka nke ha, nwere ike ịcha lenses.
Ọ bụrụ n ’ị na - echegharị anya m ndị a, ha nwere ike ịkọ ọkọ ma nke ahụ abụghị ihe anyị chọrọ, ọ bụ? Nweta akwa microfiber ma ọ bụ akwa site n'aka onye na-ahụ anya kama, n'agbanyeghị oge ụfọdụ ha na-ada mbà ma jiri ha kama n'ihi na e mepụtara ha maka ọrụ ahụ. (Cheeky music) Ugogbe anya anwụ fogging bụ nsogbu m na-ahụ gafee ọ bụla ugogbe anya maka anwụ mgbe m na-apụ na ihe, ugbu a otutu anya m na-abịa na mgbochi mgbochi foogu n'ime, nke na-enyere aka ntakịrị, ma ozigbo ị batara ihu igwe dị jụụ, ha na-agbachi agbachi, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nọ obere oge n’okporo ụzọ ahụ. Ndị a bụ usoro aghụghọ ole na ole dị oke egwu iji nyere gị aka ịnwale igbochi nke gị ka ị ghara ịbanye.
Nke mbụ, ude ntutu. Ihe ị kwesịrị ime ebe a bụ naanị ịgba obere ego n'ime oghere ahụ, wee kpoo ya na akwa microfiber naanị pụọ ruo mgbe ọ ga-apụ ma nwee olile anya na ị ga-abụ igwe ojii. Ihe na abia bu ngwa ahia nke m nwere olile anya na ezi n’ulo obula nwere ebe di nkpa n’ime ya: ncha efere, ncha efere, ihe obula ichoro ikpo ya, ihe a ga-eme ya, tinye otutu uzo n’ime oghere ma were ya onwe gị na, ị Anyị ga-etinye a ole na ole tụlee na mpụga nke oghere.
Yabụ, n'ime, ị ga-etinye ha ma kpuchie ha ọzọ na akwa microfiber gị, otu ahụ ka ọ ga-esi na mpụga nke oghere ka ebumnuche dị n'èzí bụ ịchụpụ mmiri ozuzo ma ọ bụ ihe ma ọ bụ obere griiz n'ihi ya, ha abanyeghị na lens, ma n'ime ya ga-eme ka ọ ghara ịmalite. Ihe na-esote bụ ihe m nwara n’onwe m: mmiri. Nke ahụ dị mma, nnoo ị na-atanye na oghere wee jiri ya na microfiber uh ákwà, agaghị m agbanye na oghere ahụ n'ihu igwefoto.
N'ezie, agaghị m eme ya ma ọlị, ma ị nwere ike ịnwale n'ụlọ, na nzuzo nke ọnụ ụzọ mechiri emechi ebe ọ na-enweghị onye ọzọ ga-ahụ gị. Gbalia ya ma mee ka m mara ihe n’eme. Ikpeazụ mbanye anataghị ikike maka mgbochi foogu jidere a mmanya nke ncha.
Enwere m olile anya na ọtụtụ ezinụlọ dị n'ebe ahụ nwere otu, wee pịa n'ime anya m ka ị nwee ụfọdụ akwa ncha ahụ n'ime wee, ọzọ, jiri akwa gị, hichaa ya ma kpochapụ ya ruo mgbe ọ ga-apụ n'anya olile anya na ọ ga-akwụ ụgwọ n'efu. Ugbu a, ị ga-achọpụta na ọtụtụ n'ime ha, ma e wezụga mmiri ahụ, bụ ụdị isi ncha. O doro anya na e nwere ụfọdụ chemical mmeghachi omume ma ọ bụ enweghị mmeghachi omume n'ebe ahụ iji gbochie fogging.
Yabụ ị nwere ike ịnwale ngwaahịa ndị ọzọ dabere na ncha, mana ọzọ, emela ya na ugogbe anya maka anwụ kachasị amasị gị n'ebe ahụ na ị gaghị enwe ike ibute mbibi n'ihi na enweghị m ike ịta ụta maka ihe ọ bụla mere. Ọfọn, ma e wezụga ihe ndị a dị oke egwu, ekwuru m na e nwere ngwaahịa pụrụ iche maka ọrụ ahụ. Yabụ ị nwere ọgwụgwọ mgbochi foogu yana ọgwụgwọ hydrophobic, yabụ ọgwụgwọ hydrophobic, nke ọma nke na-aga na mpụga nke oghere, yana isi na ọ bụ echiche nke ịnweta mmiri mmiri ozuzo ka ọ ghara ịrapara na nke gị igbochi echiche ahụ, na mgbe ahụ n'ezie mgbochi-fogging akwụsị ihe ọ bụla e dere na ike ma ọ bụ kalama, na nke a n'ime nke gị iko fogging elu. (egwu obi ụtọ) Oge ị tụrụ ugogbe anya maka anwụ gị, ọ na-agbawa obi na-agbawa obi, ọ nweghịkwa ihe dị njọ karịa ọkọ mbụ ahụ ị nwetara na iko.
Ọfọn, usoro na-esote, enweghị m ike iwepụta ya, ma enweghị m ma GCN ma ọ bụ GCN Techbe nwere ike ịta ụta maka mmebi mebiri. Anụla m na ọ bụrụ na ị na-eji ezé ezé eme ọkọ ma jiri nwayọ jiri ya hichaa ya, enwere ike iwepụ ụfọdụ ncha, a gwara m na ntacha eze ị chọrọ bụ nke dị mfe, yabụ na-abụghị nke gel, ndị na-abụghị ndị na-acha ọcha ma na-abrasives, n'ụzọ bụ isi onye kachasị mfe ị nwere ike ịchọta. M kwuru zuru ezu? Ka anyị hụ otu esi eme ya, n'ihi na mgbe m na-ele anya na akpa nke akpa Ollie maka ego nri ya, achọtara m mpempe akwụkwọ ochie ochie, yabụ ka anyị lee anya ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ na ha.
Ọfọn, ọ naghị arụ ọrụ n'ezie, ime ihe n'eziokwu, yabụ echere m na m ga-etinyeghachi ya n'akpa Ollie na nke ọma, ọ gaghị achọpụta ihe ọ bụla ọzọ karịa nku anya ya ga-anụ isi ahụ niile. Ya mere, anyị nọ! Ugogbe anya maka anwụ nke na-abụghị naanị mkpọmkpọ ebe ọcha, mana enweghikwa ohere ịmị elu. Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, mgbe ị na-apụ apụ ma na-enwe ọtụtụ oge n'efu n'etiti agbụrụ na mgbe echiche gị dị ka nke m, mgbe ahụ, m na-agbanye nke a.
Crazy Me Ugbu a, ọ bụrụ na ị nwere echiche ọ bụla banyere otu esi egbochi ugogbe anya maka anwụ ma ọ bụ na-ele anya na ntụpọ, hapụ ha ebe ahụ na nkwupụta, Achọrọ m ịma, ugbu a hụ na ị masịrị isiokwu a yana nke gị Nye ya nnukwu isi mkpịsị aka elu ma echefukwala ilele ụlọ ahịa GCN na shop.globalcyclingnetwork.com Win ụfọdụ ugogbe anya Roka, Ollie, ọ bụ naanị unboxed wee pịa ebe a n'okpuru.
Ugbu a, ọ bụrụ n’ịchọrọ ihicha ihe ọzọ, kedụ maka powertrain gị n’oge a, pịa ebe a n’okpuru.
Ego ole ka ọ na-eri iji gbakwunye ndenye ọgwụ na ugogbe anya maka anwụ?
Eziokwunkezibụ ebe n'etiti $ 150 na $ 500, dabere na ike gịndenye ọgwụ, okpokolo agba na anya m ahọrọ, yana nkwado ego nke atụmatụ gị.
Anya edo edonyochaa karịa nke ogologo ọkụ na-acha anụnụ anụnụ nke ìhè, na-enye anyị ohere ịhụ ọdịiche dị mma. Nke a na-emesi obi ikendị na-agba ígwèọhụhụ dị mma nke nwere obere ọkụ, na usoro ndị ọzọ, n'ọnọdụ ọnọdụ gbara ọchịchịrị nwere obere anwụ.
Yabụ, ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ịkwọ ụgbọala n'abalị, ị nwere ike ịnọ na-eche maka enyo ọhụụ abalị. Ndị a bụ anya edo edo na-ekwu na ha na-enwu gbaa ma belata nchapu, mana ha na-arụ ọrụ n'ezie? site na ihe ngosi ahụike ahụike Dr, nke ga - enyere gị aka ịmụta ihe niile gbasara ọhụụ anya ma chọta ngwaahịa ọhụụ kachasị mma. Yabụ, ọ bụrụ na ịnọ ebe a na ọwa, pịa bọtịnụ ịdenye aha n'okpuru ka ị ghara ịchefu ihe ọ bụla m ga-eme n'ọdịnihu m na-ekwu maka enyo ọhụụ ọhụụ ma ọ bụ enyo anya abalị nke abalị ndị a adịgoro nwa oge, na mbụ ha wee pụta dị ka égbè enyo anya maka ndị na Ọ bụrụ na ị ga-aga ịchụ nta maka nnụnụ ma ọ bụ nkọ égbè, tinye ndị a pụrụ iche odo ma ọ bụ oroma nzacha na n'ihi na ụdị tint mma iche obere na-enyere gị aka ịhụ anya ihe dịtụ mfe karịa n'ịtụgharị a tint n'ime ugogbe anya abalị ma ugbu a ị hụrụ na a na-akpọsa ya n'ọtụtụ ebe n'ịntanetị na gas gas na-akpọsa n'ịntanetị ka ha kwesiri isi rụọ ọrụ na anya edo edo na-enwu enwu ka ị wee hụ obere mma n'abalị ma ha nwekwara ụfọdụ atụmatụ iji belata ncha ihu ka ị ghara inwe ọtụtụ nsogbu na ọkụ ọkụ na-abata abata, nke m chere na ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla na-eme ya n'ihi na ihe na-agbanyekwu ọkụ. ị ga-enweta ọkụ ndị ahụ na-acha anụnụ anụnụ na-acha odo odo mgbe ị na-eche ma ghara ịdị m mma.
Ihe mbu nke na-akpasu iwe bu na iko ndi a na-acha ocha n’ime mpaghara enweghi ike ime ka ihe di nma n’ihi na ha ghaghi oke onu nke na-abanye n’ime anya, ma ha na-eme ka onye mmadu buru mmadu n’ile anya na ihe di nma karie n’ihi na o were ihe nile. Igwe na-acha anụnụ anụnụ na-ewepụ nke ahụ ma na-eme ka ọ dị mma ka ihe niile na-acha odo odo na-achakwa ọchịchịrị ka ị na-agbada n'okporo ụzọ gbara ọchịchịrị, enweghị ọkụ ihu igwe ma ọ bụ ọbụna ihe ọ bụla ọzọ? Arsgbọ ala na-anya n'eziokwu, ọ ga-eme ka nke a sie ike ịhụ, mana n'ihi mmetụta ọkụ, ọ bụrụ na ịnwere ike ịkwọ ụgbọala na chi ọbụbọ enwere ike ị nwee snow ma ị ga-enweta ọtụtụ snow ahụ gosipụtara na ihe dị ka ihe na-acha odo odo ma anya ndị a na-ahapụ Ihe ndị a yiri ka ọ na-enwu gbaa n'ọnọdụ ndị a ma ọ masịrị m na ị na-eyi ha n'ọchịchịrị ma ọ bụ nke chi ọbụbọ a na ọkụ dị ala. Ọbụna m jiri ya tụnyere ya mgbe m na-anya ụgbọ ala ahụ, na-etinye ha ma ọ bụ na-ewepụ ha ma chọpụta na ha na-eme ka ọdịiche ahụ dịkwuo ntakịrị ma ọ bụrụhaala na ọ na-eme ka ihe dị mfe ịhụ n'abalị nwute ma ọ nweghị ihe nkwupụta ahụ gbasara nnukwu ọkụ ihu, Echere m na nke ahụ na-enyere aka. Enwere m mmetụta nke ọkụ onwe m, enwere m mpụga ugboro ole na ole n'afọ ma mmetụta izugbe nke ọkụ ọkụ ndị ahụ na-acha anụnụ anụnụ na-ewe ezigbo iwe, yabụ ma ọ dịkarịa ala, ha na-acha odo odo karịa ọkụ ụgbọ ala ochie site na 1970s, ma ọ bụrụ na ị chetara ihe nke ahụ yiri ka ọ nwere ihe dị jụụ na ụfọdụ ụdị ndị ahụ, ma ị na-azụrụ iko pụrụ iche, na-enweta ihe osise dị ka ndị a, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịcha edo edo na iko gị mgbe niile, ndị a nwere nzacha na-agbanwe agbanwe, ọ bụghị 100 dị ka ugogbe anya maka anwụ, mana ọ nwere nzacha ahụ na-ebelata nchacha mgbe ị na-ele anya ihu mmiri dị ka okporo ụzọ gbara ọchịchịrị dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ ma eleghị anya na-ele mmiri na-agba ọsọ na-ezu ike n'okporo ámá mmiri wee na-awụli elu ma na-akụ anya Enwere m ike igosi gị nke a n'ihi na kọmputa m nwere ihe nzacha na-esote m n'azụ ma ị nwere ike ime ya t hụ ma ọ bụrụ na m na-atụ ya n'akụkụ ahụ ma ọ bụrụ na m gbanwee ya 90 degrees ị nwere ike ịhụ ya ga-acha odo odo na nke ahụ bụ n'ihi na kọmputa ahụ polarizing f Ilter na polarizing filter na iko na-ekewa ugbu a enwere m ndị ugbu a Gụọ ihe ụfọdụ ndị kwuru n'isiokwu ndị gara aga kwuru na ugogbe anya ịkwọ ụgbọala n'abalị nyere ha aka ịkwọ ụgbọala nke ọma n'abalị.
Agbanyeghị, ọ bụrụ n’ịtụle nyocha emere n’oge na-adịbeghị anya site na 2019 nke a nwalere mmadụ iri abụọ na abụọ nwere na-enweghị enyo anya mmiri abalị na simulator ịkwọ ụgbọala na enyo anya abalị anaghị enwe mmelite ma e jiri ya tụnyere naanị anya anya doro anya, nke a na-eweta ọtụtụ obi abụọ na ụmụ mmadụ a n’ezie na-enyere aka. iji hụ nke ọma mana enwere m ike ikwenye na ha na-enyere ndị mmadụ aka inwe ahụ iru ala dịka m nwere ndị ọrịa batara ma jụọ ha kpọmkwem ma ọ ga-amasị ha ịnweta ụdị iko ndị a iche iche iko naanị maka ịkwọ ụgbọ n'ihi na ọ na-enyere ha aka n'ezie, mana n'otu oge ahụ Enwere m ndị nwara ha. Ajụrụ m onwe m, ha sịghị mba, ha anaghị enyere ha aka, ya mere, m ga-agwa gị okwu a n'okpuru, ma ọ bụrụ na ị gbalịrị enyo ọhụụ abalị, biko mee ka m mara ma ọ bụrụ na ị chere na ha nyere aka. echiche gị banyere onye m bụ? Imirikiti ndị ọkachamara n'ọrịa anya ọzọ na-atụ aro na ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ịkwọ ụgbọala n'abalị, tụlee ihe dị n'ihu gị. Gbaa mbọ hụ na ihicha anya ihu ikuku gị nke mere na ikuku ikuku gị enweghị ntụpọ na mmanụ ọ bụla site na anụ ahụ gị, ma ọ bụ n’ihu ma ọ bụ n’azụ nke ikuku ahụ Ọ bụrụ na ị na-eyi ugegbe anya, gbaa mbọ hụ na ha dị ọcha ma dọpụta Tụlee inwe ezigbo mma mgbochi -nkpuchi mkpuchi na iko a nwere ike inyere obere aka ma jide n'aka na ọkụ ihu gị na-adị ọcha n'ezie, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu mgbe ọ dị gị ka ihe dị ọtụtụ oke gbara ọchịchịrị ma ị nweghị ike ịhụ ihe ọ bụla, ijide n'aka na ọkụ ihu gị dị ọcha n'ihi na mgbe ụfọdụ, ha na-enwekwa unyi, ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọhụ gị na-agbanwe yana ịkwọ ụgbọala gị n'abalị na-adịghị mma yana yabụ younweghị ahụ iru ala ịkwọ ụgbọala maa hụ na ị gara ileta ophthalmologist anyị n'ihi na enwere ụfọdụ Ọrịa anya nke nwere ike ibute ọhụụ na-adịghị mma n'abalị mgbe ihe ndị dị ka cataracts na ọbụlagodi nwere ike ịrịa ọrịa na-agwa onye ọkachamara n'ọrịa gị okwu ọzọ, jiri nwayọ kwuo okwu maka ikpe ikpeazụ m nwere ike ịnwale ha mana atụla anya na ha ga-eme ka ihe dị mma ma ọ ga-amasị ịkwọ ụgbọala n'ehihie hey ma ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu a kụrụ bọtịnụ dị ka m hapụ ikwu ma ọ bụghị ịdenye aha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele etiti dị mma Fraịde na-enyocha ebe a site na ahụike ahụike anya gị ị nwere ike pịa ebe a na Pịa ma ọ bụ kpatụ ihuenyo ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ile ihe ọzọ dị mma site na ahụike m ị nwere ike ịga n'ihu wee pịa ihuenyo ebe a ma ọ bụ pịa Hey ekele maka ịlele anya ya na anyi ga akparita uka na nso nso
Kedu ihe kpatara eji anya ugogbe ịgba ígwè?? Extra mkpuchi iji nyere aka ịkwụsị nkume na obere okwute na grit si smas n'ime gị anya na ọsọ, naosisiemechila ọhụụ gị. Ekwenyere m na nkwupụta ndị gara aga, gbakwunyere ga-agbakwunye nke ahụ buru ibuikonyere aka gbochie ikuku site na anya gi.
Kedu ihe kpatara ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji eyi ugogbe anya anwụ n’elu eriri igwe?
Iburu gịugogbe anya maka anwụn'okpuru gịokpu agha bụụzọ na-ezighi eziyikwasị anya ugogbe anya. Nke abuihe na - eme ma ọ bụrụ na i tinye ha n’ihuyinke giokpu agha. KasịNdị na-agba ịnyịnya ígwè na-eyi ugogbe anya anwụdị ka ya n'ihi na ọ dị ha ka ha ga-akwụsi ike karị ma zere ha ịpụ.bọchị 2020
Gịnị mere ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji etinye ugegbe ha n’elu eriri igwe?
Nke mbụ, ebe ọ bụokpu agha ahụezubere ka ọ pụọ mgbe ịnya naeririnke ọtụtụokpu aghaEzubere ka o dina alaiheụlọ arụsị na agba,iheụzọ kachasị mmayikwasị anya ugogbe anyabụ naiheogwe akakarịrị eriri.
hello ohuru na tank shark
Enwere m ike iweta ugogbe anya m iji nweta ọgwụ?
'Ve chọtala otu ụzọ ụmụ nwokeugogbe anya maka anwụma obu nwanyiugogbe anya maka anwụna ị na-akpọ isiala nye, ma ị chọrọ ụfọdụndenye ọgwụlenses iji hụ ọfụma n’èzí. Ya mere, ị nwere ike ịjụ, sị, 'Nwere ikeị tụgharịa ọ bụlaugogbe anya maka anwụn'imeọgwụ ugogbe anya maka anwụ? ', na azịza ya bụ ee.12.31.2019
Enwere m ike ịzụta ugogbe anya maka anwụ ma tinye anya m ọgwụ?
Gịike itinye ọgwụ anya mọ bụlaugogbe anya maka anwụ. N'ezie, ha ekwesịghị ịbụ otu agba nke nke mbụanya. Gịnwere ikehọrọ dị iche iche tint agba gịanya m.09.06.2011
Kedu ka m ga-esi chebe anya m mgbe m na-agba ịnyịnya ígwè?
Nke kacha mmaịgba ígwèiko na-ebelata ntigbaa, na-enyo 99 ruo 100% nke ụzarị UV, na-enye ihe ọhụụnchedo, dị mma ma dị fechaa, nọrọ n'ọnọdụ na ihu ma ghara ịgbagọ agba. Anyị na-akwado kechie-ịke okpokolo agbachebenke gianyasite na ifufe na irighiri ahihia. Ndị a na-enyekwu mkpuchi ma na-anọkarị ebe ka mma.
Ugogbe anya maka anwụkpuchido anya gi. Ọ dị mfe dị ka ọ na-enweta! Iji ogo dị eluuwe anyaga-echebe anya gị ka ị ghara ịba alaka, akwụkwọ, apịtị ma ọ bụ obere unyi ọ bụla na anya gị mgbe ugwuigwe kwụ otu ebema ọ bụ nzọ ụkwụ na-agba ọsọ.Na-eyiri ugogbe anya maka anwụdị mkpan'ogeoyi dika o din'ogendaeyo.07/20/2016
Plọ ahịa Kachasị Anya Nlekọta Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Ugwu na Egwuregwu Ugogbe anya maka anwụ. 50% Gbanyụọ na ugogbe anya anwụ kacha mma. All nke anyị gbaa ugogbe anya na-enye ọkọ na-eguzogide ọgwụ, na UV nchedo oghere na a wraparound etiti. A na-ahọpụta Gear Pro nchekwa # 1 ụlọ ahịa n'ịntanetị iji zụta ọgwụ igwe eji agba ịnyịnya ígwè na ntanetị. 1000 + ezigbo nyocha ndị ahịa.
Kedu ka esi eji ugogbe anya maka ọgwụ maka ugwu igwe?
Ugogbe anya anwụ Bolle maka ịgba ịnyịnya ígwè na-abịa na teknụzụ lens ọhụrụ nke akpọrọ B-mkpa, teknụzụ a na-eji eziokwu dị mfe ọtụtụ wears anaghị eji oge ikpeazụ 1/3 nke anya m. Ha nwere ike ime ka enyo gị dị nro karịa nke ọma, na-echekwa ugogbe anya maka anwụ.
You chọrọ ugogbe anya maka anwụ iji gbaa igwe kwụ otu ebe?
Dị ka onye na-agba ịnyịnya ígwè, ọ bụ ihe kachasị mkpa iji hụ nke ọma ma kpuchido anya gị site na ụzarị anyanwụ na-emerụ ahụ. Standard ugogbe anya maka anwụ anaghị egbutu ya, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ nha anya, ị kwesịrị iyi kọntaktị, ma ọ bụ nweta ugogbe anya maka anwụ na-agba ígwè.